Split (2016) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
1975 ခုနှဈက အမရေိက မှာတကယျဖွဈပကျြခဲ့တဲ့Billy Milligan ဆိုတဲ့လူတဈဦးရဲ့ဖွဈရပျမှနျကို ပွနျလညျရိုကျကူးတငျဆကျထားတဲ့ရုပျရှငျဇာတျလမျးကောငျးတဈခုဖွဈပါတယျWanted ရုပျရှငျကားဖွငျ့ နာမညျကွီးလာသော
James McAvoy ရဲ့ မကျြနှာပုံစံ မကျြနှာထားအမြိုးမြိုးကိုစိတျကနြေပျလောကျစရာ မွငျတှရေ့မှာဖွဈပွီးဇတျလမျးပုံစံကတော့ ကိုယျရညျသှေး စိတျအမြိုးမြိုးဖွဈတညျနတေဲ့စိတျရောဂါ ဝဒေနာရှငျ လူငယျလေး နရောကနေ စတငျထားပါတယျ…ကယျဗငျ ဟာ ကိုယျရညျသှေး စိတျ အမြိုးမြိုး ဖွဈပျေါတကျသောရောဂါရှိသဖွငျ့ စိတျရောဂါကု ဆရာဝနျဖွဈသူနှငျ့အပတျတိုငျး တဈကွိမျစီ ပွသနရေသူဖွဈပါတယျ….သူ့ရဲ့ ပုံမှနျဘ၀ မှာတော့ အလှနျတျောတဲ့လူငယျလေး ဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ မသိစိတျထဲတှငျတော့ဒငျးနဈ ၊ ပတျထရဈရှာ ၊ ဟတျဝဈ ၊ ဘယျရီ အစ ရှိသောနာမညျမြားစှာဖွငျ့ ယောင်ျကြား မိနျးမ ကလေး အစရှိသောကိုယျရညျသှေး စိတျခှဲပေါငျးမြားစှာ ရှိနပေါတယျစိတျရောဂါကု ဆရာဝနျ အနဖွေငျ့ ထို စိတျမြား အပွငျထှကျမလာအောငျထိနျးခြုပျ ကုသပေးနခေဲ့သျောလဲပဲ ကယျဗငျ ၏ မူလ စိတျအခွအေနကေိုအနိုငျယူကာ ကိုယျရညျသှေး စိတျမြားအခြိနျအတိုငျးတာ တဈခုစီအလှညျ့ကြ ထှကျပျေါခဲ့ပါတော့တယျ….တဈရကျမှာတော့ ကယျဗငျ ရဲ့ မသိစိတျ အတှငျးမှဒငျးနဈ ထှကျပျေါခဲ့ပွီးကစေီ နှငျ့ သူငယျခငျြး မိနျးကလေး ၂ ဦးကို ဖမျးချေါ၍အခနျးတဈခုအတှငျး သော့ခတျထားခဲ့ပါတော့တယျ…ထို ၃ ဦးသညျ ဟဈဝတျ ၊ ပတျထရဈရှာ ၊ ဒငျးနဈ တို့ အပွငျကိုယျရညျသှေး ပုံစံ တဈခုစီ ဖွငျ့ဆကျဆံရမညျဖွဈပွီးမညျသို့ မညျပုံ လှတျမွောကျအောငျ ကွိုးစားမညျဆိုသညျကတော့ ဆကျလကျကွညျ့ရှုလိုကျကွပါ….
1975 ခုနှစ်က အမေရိက မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့Billy Milligan ဆိုတဲ့လူတစ်ဦးရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်Wanted ရုပ်ရှင်ကားဖြင့် နာမည်ကြီးလာသော
James McAvoy ရဲ့ မျက်နှာပုံစံ မျက်နှာထားအမျိုးမျိုးကိုစိတ်ကျေနပ်လောက်စရာ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးဇတ်လမ်းပုံစံကတော့ ကိုယ်ရည်သွေး စိတ်အမျိုးမျိုးဖြစ်တည်နေတဲ့စိတ်ရောဂါ ဝေဒနာရှင် လူငယ်လေး နေရာကနေ စတင်ထားပါတယ်…ကယ်ဗင် ဟာ ကိုယ်ရည်သွေး စိတ် အမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်တက်သောရောဂါရှိသဖြင့် စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်ဖြစ်သူနှင့်အပတ်တိုင်း တစ်ကြိမ်စီ ပြသနေရသူဖြစ်ပါတယ်….သူ့ရဲ့ ပုံမှန်ဘ၀ မှာတော့ အလွန်တော်တဲ့လူငယ်လေး ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ မသိစိတ်ထဲတွင်တော့ဒင်းနစ် ၊ ပတ်ထရစ်ရှာ ၊ ဟတ်ဝစ် ၊ ဘယ်ရီ အစ ရှိသောနာမည်များစွာဖြင့် ယောင်္ကျား မိန်းမ ကလေး အစရှိသောကိုယ်ရည်သွေး စိတ်ခွဲပေါင်းများစွာ ရှိနေပါတယ်စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန် အနေဖြင့် ထို စိတ်များ အပြင်ထွက်မလာအောင်ထိန်းချုပ် ကုသပေးနေခဲ့သော်လဲပဲ ကယ်ဗင် ၏ မူလ စိတ်အခြေအနေကိုအနိုင်ယူကာ ကိုယ်ရည်သွေး စိတ်များအချိန်အတိုင်းတာ တစ်ခုစီအလှည့်ကျ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတော့တယ်….တစ်ရက်မှာတော့ ကယ်ဗင် ရဲ့ မသိစိတ် အတွင်းမှဒင်းနစ် ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးကေစီ နှင့် သူငယ်ချင်း မိန်းကလေး ၂ ဦးကို ဖမ်းခေါ်၍အခန်းတစ်ခုအတွင်း သော့ခတ်ထားခဲ့ပါတော့တယ်…ထို ၃ ဦးသည် ဟစ်ဝတ် ၊ ပတ်ထရစ်ရှာ ၊ ဒင်းနစ် တို့ အပြင်ကိုယ်ရည်သွေး ပုံစံ တစ်ခုစီ ဖြင့်ဆက်ဆံရမည်ဖြစ်ပြီးမည်သို့ မည်ပုံ လွတ်မြောက်အောင် ကြိုးစားမည်ဆိုသည်ကတော့ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါ….
Aleksandra Svetlichnaya Andrea Havens Anya Taylor-Joy Barbara Edwards Betty Buckley Brad William Henke Bruce Willis Christopher Lee Philips Colin Campbell Corinne Costa Gary Ayash Haley Lu Richardson Izzie Coffey Jalina Mercado James McAvoy James Robinson Jr. Jeff Buckner Jessica Sula John Jillard Sr. John Mitchell Jon Douglas Rainey Julie Potter Junnie Lopez Kash Goins Kelly Werkheiser Kim Director Lyne Renee M. Night Shyamalan Matthew Nadu Michael J. Kraycik Michaela Bockarie Michelle Santiago Nakia Dillard Neal Huff Peter Patrikios Robert Bizik Rosemary Howard Roy James Wilson Sebastian Arcelus Shawn Gonzalez Steven Dennis Ukee Washington Vincent Riviezzo
Option 1 storage.msubmovie.com 550 MB SD (480p)
Option2megaup.net 550 MB SD (480p)
Option3datbu.com 550 MB SD (480p)
Option4uptomega.com 550 MB SD (480p)
Option5sharer.pw 550 MB SD (480p)
Option6yuudrive.me 550 MB SD (480p)
Option9sharer.pw 1.3 GB HD
Option 10 yuudrive.me 1.3 GB HD
Option 11 uptomega.com 1.3 GB HD
Option 12 storage.msubmovie.com 3.1 GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 13 datbu.com 3.1 GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 14 sharer.pw 3.1 GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 15 yuudrive.me 3.1 GB FHD DTS-HDMA 5.1
Hell Fest (2018) 2018